तपाईको बच्चामा पनि अनिन्द्राको समस्या ? यस्तो छ समाधान  OnlineKhabar
अहिले धेरै आमाबुवाका लागि टाउको दुखाई बनेको छ, बच्चाको अनिन्द्रा । राती अबेरसम्म बच्चा नसुत्ने, सुत्नुअघि झगडा गर्ने, निदाउन नसक्ने, निदाएपनि बेलाबेला ब्यूँझने जस्ता समस्या धेरैले झेलिरहेका होलान् ।
राती बच्चालाई सुताउनै गाह्रो भइरहेको छ । किन होला ?
अहिले बच्चाहरुमा पनि तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन देखिएको छ । खासगरी पढाई, बिद्यालय, होमवर्क, साथीहरुको व्यवहार, पारिवारिक वातावरण आदिले उनीहरुमा चिन्ता थपिएको छ । यहि कारण उनीहरुको रातको निन्द्रा बिथोलिएको छ ।
वयस्क एवं बृद्धबृद्धा मात्र होइन, बच्चाहरु समेत अहिले अनिन्द्रका शिकार भएका छन् ।
विगतमा जस्तो बच्चालाई लोरी सुनाएर सुताउने आमाबुवासँग समय छैन । उनीहरु कामधन्दामै यति व्यस्त छन् कि, बच्चाको लागि कुनै समय छैन । त्यसैले बच्चाको झै-झमेलाबाट उम्कनका लागि उनीहरुले बच्चाका लागि खेलौनाको जोरजाम गरिदिएका छन् । टेलिभिजन, इन्टनेट, मोवाइल, ट्याबलेट सबै सुविधा उपलब्ध गराइदिएका छन् । यहि साधनबाट बच्चाले आफ्नो मन बहलाउने गरेका छन् ।
तर, यसले बच्चाको शारीरिक/मानसिक विकासमा अवरोध पैदा गरिदिएको छ । यहि कारण बच्चामा अनिन्द्राको समस्या थपिदै गएको छ ।
बच्चाको लागि पोषणयुक्त खाना जति महत्वपूर्ण छ, उत्तिनै महतवपूर्ण निन्द्रापनि । बच्चाले दैनिक ८ वा ९ घण्टासम्म गहिरो निन्द्रा लिनुपर्छ भनिन्छ । तर, अहिले होमवर्क, पढाई, शिक्षकको साइनमेन्ट आदिको दबावमा उनीहरुको सुत्ने तालिका पनि छोटिएको छ । त्यसमाथि कति अनिन्द्रको समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
अनिन्द्राकै कारण बच्चाहरु दिनभर बेचैन हुने, आक्रमक हुने समस्या समेत छ ।
कति निन्द्रा आवश्यक
निन्द्रा यस्तो प्राकृतिक औषधी हो, जसले शरीरमा नयाँ स्फूर्ति पैदा गर्छ । उर्जा मिल्छ । ताजगी मिल्छ । बयस्कहरुले दैनिक ७ वा ८ घण्टा निदाउनुपर्छ भनिन्छ ।
भर्खर जन्मिएका बच्चाका लागि दैनिक २० घण्टा निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । यसैगरी दुई बर्षसम्मका बच्चाका लागि १२ देखि १४ घण्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । २ देखि ५ बर्षसम्मका बच्चाले १२ घण्टा निदाउनुपर्छ । ६ देखि १२ बर्षसम्मका बच्चाले १० घण्टा सुत्नैपर्छ । १२ बर्षपछि अर्थात किशोरवयमा ८ वा ९ घण्टा निदाउनुपर्छ ।
कहिले जाने चिकित्सककहाँ ?
के गर्ने निन्द्रा नलागे ?
– सुत्नुअघि बच्चालाई पढ्ने वा नुहाउने बानी गराउन सकिन्छ ।
२०७४ भदौ २८ गते १६:०३ मा प्रकाशित
माक्सले प्रदूषित वायु रोक्छ कि अक्सिजन प्रवाहमा वाधा पुर्‍याउँछ ?